Ny fiangonana manjombona amin'ireo karandoha 40.000 | Vaovao momba ny dia
Maria Jose Roldan | | Fialantsasatra any Eropa, General, firenena, Repoblika Tseky
Amin'ny ankapobeny ny olona dia te-handeha amin'ny toerana tsy mahazatra na farafaharatsiny hahafantatra azy ireo raha sanatria ka te-hitsidika azy ireo isika indray andro any. Any Espana sy manerana an'izao tontolo izao dia tsy misy ny tsy fahitana toerana hafahafa, ilay karazana rehefa lazain'izy ireo aminao momba azy ireo ianao dia mahazo gisa, ary mety hanana nofy ratsy mihaino tantara vitsivitsy fotsiny ianao. Ny sasany, ny mahaliana kokoa, dia tsy vitan'ny hoe feno ny tantaran'ireto toerana ireto, fa mitady fomba hitsidihana azy ireo sy hijereny samirery, raha tena misy na tsia ny tantara rehetra lazainy.
Androany aho te hiresaka aminao momba ny iray amin'ireto toerana ireto izay hita manerana an'izao tontolo izao fa tsy ny rehetra no sahy mitady ny sidina mora indrindra hahafantarana azy. Androany aho te hiresaka aminao momba ny fiangonana misy ny karan-doha 40.000, na ireo faty 40.000. Ary eny, manjombona sy mahatsiravina izy raha ny fahitana azy.
1 Any amin'ny Repoblika Tseky
2 Karan-doha 40.000
3 Ny angano ny haingo
4 Ny fiangonana misy karan-doha 40.000
4.1 Fiangonan'ny sary misy ny karan-doha 40.000
Any amin'ny Repoblika Tseky
Raha te-hitsidika an'ity Fiangonana mampihoron-koditra ity ianao indray andro, dia tsy maintsy mandalo 90 kilometatra miala an'i Prague, any amin'ny Repoblika Czech ianao. Tsy maintsy mankany Sedlec ianao, izay tanàna manodidina ny tanànan'i Kutna Hora.
Na dia tsy toerana tsara indrindra eto an-tany izao ny fitsangantsanganana dia io no toerana tokony halehanao raha te-hitsidika an'io fiangonana miavaka eo amin'izao tontolo izao io ianao - ary ny asa ratsy indrindra amin'ny rehetra.
Ity fiangonana ity dia manana karandoha tsy latsaky ny 40.000 izay mampiseho amin'ireo mpitsidika azy fa akaiky ny fahafatesana. Aza mieritreritra hoe karandoha sandoka izy ireo, satria karandoha misy faty 40.000 XNUMX, izany hoe tena taolan'olombelona. Ireo taolana sy karandoha rehetra ireo dia olona iray andro izay niaina teto amin'izao tontolo izao ary nanana ny fiainany manokana.
Ireo taolam-paty ireo dia an'ny olona samy hafa firenena, toa ny Poloney, Alemanina, Czechs, Belziana ary ny Holandey. Mazava ho azy, mandraka androany dia tsy ho fantatrao hoe an'iza ny karandohany tsirairay ary azo inoana fa tsy fantatry ny taranany koa, na dia handeha hitsidika an'io fiangonana manjombona io aza izy ireo.
Ny angano ny haingo
Na dia miresaka angano aza izy ireo dia tsy misy mahalala na tena izy na tsia, na dia mazava ho azy aza ... ny fanazavana sasany dia tsy maintsy manana firavaka hafahafa toy izany ho an'ny fiangonana iray izay manota sy tsy manam-paharoa eran'izao tontolo izao.
Niverina tamin'ny taona 1.142 ny tantara raha nisy andriandahy iray tao anatin'ny dia nataony avy tany Prague ka hatrany Moravia, nijanona sasatra teo akaikin'ny ala iray satria reraka izy ary tsy afaka nanohy ny diany raha tsy miala sasatra. toerana sasany.
Tena lehibe ny havizanany ka resin-tory avy hatrany izy, niditra tao anaty torimaso lalina. Tao amin'ny nofinofiny dia nisy vorona niseho taminy ary niditra tao am-bavany ary nanome azy ny hevitra hanangana monasitera ao amin'io toerana ialofanany io. Rehefa nifoha izy dia nihaino ny nofiny ilay andriandahy ary nifandray tamin'ny moanina avy amin'ny baiko Cistercian Waldassen, any Bavaria mba hahatanteraka ny nofinofiny - ara-bakiteny-.
Tamin'ny taona 1278, ny abbot an'ny monastera, Jindrich, dia nalefa tany amin'ny Tany Masina izay nakana ny tany avy tany Golgota mba hiparitaka manodidina ny fasana. Vokatr'izany dia noheverina fa masina ity toerana ity ary izay miala sasatra aorian'ny fahafatesany dia hahatratra ny lanitra.
Fa taty aoriana, ny pesta mainty tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-30.000 dia niteraka fahafatesan'ny olona mihoatra ny 500 ary tamin'ny taonjato faha-XNUMX dia moanina XNUMX no maty tao anatin'ny monasitera noho ny ady Hussite. Tamin'izany no nitomboan'ny fandevenana tao amin'ity toerana ity, ary tonga ny fotoana izay tsy azo halevina intsony ity saha masina ity satria be loatra ny faty ary tsy zakany.
Tamin'izany fotoana izany no nanomboka nampiasaina ny taolan'ny olona nalevina nijanona teo amin'ilay toerana, izany hoe, tao am-piangonana, fa tamin'ity tranga ity dia ny fanaingoan'izy ireo ny toerana no nampiasan'izy ireo. Na dia somary makabe aza ny haingo, dia fomba iray ahafahan'ny olona rehetra izay nalevina tao amin'ny fasan'ny Fiangonana, afaka nanohy, na dia tsy nalevina aza, tao amin'ilay toerana nandevenana azy tamin'izany fotoana izany.
Ny fiangonana misy karan-doha 40.000
Ankehitriny, ny fiangonana dia manana trano fiangonana 2, ny any ambany izay fantatra amin'ny anarana hoe 'fasana sy fiahiana' ary ny any ambony izay fantatra ary antsoina hoe 'madio sy mahasalama', maneho ny herin'ny mazava mandrakizay. Misokatra ho an'ny besinimaro ny fiangonana misy karandohany 40.000 ary mankalaza be ihany koa izy ireo afa-tsy amin'ny Andron'ny All Saints, izay ho fanajana ireo maty rehetra tonga tao dia tsy tanterahin'izy ireo izany.
Raha mikasa hamangy ity fiangonana ity ianao noho ny manjombona nefa azonao atao tsara ny mamantatra ny haingo hafahafa - tsy misy ifandraisany amin'ny mpamono olona na amin'ireo fiangonana namono ny olona handravaka ny rindrin'izy ireo -, azonao jerena amin'ny antsipiriany manjombona , ary izy ireo no jiro taolana misy.
Ny olona maty tamin'ny androny dia tsy afaka naka sary an-tsaina mihitsy fa ny taolany dia hiafara amin'ny lakilen'ny haingon-trano fiangonana, na amin'ny trano fiangonana na amin'ny valindrihana miendrika jiro. Ny sary aza dia vita amin'ny taolana, miaraka amin'ny famoronana mamorona.
Raha olona mino ny tantara paranormal ianao dia alao sary an-tsaina fa misy matoatoa miisa 40.000 mihantona manodidina ny rindrin'ny fiangonana miaraka amin'ny taolanao, fa iza no fanahy te hijanona eo akaikin'ny taolana an'arivony maro? Azo antoka fa ao am-piangonana, ankoatry ny olona mitsidika azy na mankalaza lamesa ao anatiny, ny hany fahitana hitanao dia ny fahanginana, ny fandriampahalemana ary ambonin'izany rehetra izany ... taolana olombelona. Eny tokoa, Heveriko fa tsy toerana tsara hankalazana mariazy na hetsika ara-pivavahana sasany, satria na dia fiangonana misy fankalazana atao isan'andro aza dia iza no maniry hankalaza hetsika iray amin'ny fiainany amin'ny toerana toa izao? Angamba ny maka sary horonantsary mampatahotra dia tsy ho ratsy, fa tsy amin'ny zavatra hafa. Ahoana ny hevitrao momba ity toerana tsy mahazatra ity?
Fiangonan'ny sary misy ny karan-doha 40.000
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fialantsasatra any Eropa » Repoblika Tseky » Ny fiangonana manjombona misy karandoha 40.000
Handeha vondrona iray izahay amin'ity lohataona ity, te hahaliana ahy ianao ny hampahafantarinao ahy ny fandaharam-potoana izay hoentin'ny lamasinina avy any Prague ary raha eo akaikin'ny tobin'ny tanàna ity.
ruh dia hoy izy:
Manontany tena fotsiny aho hoe iza no hanambady ao amin'io fiangonana io sy amin'ny Halloween
Valiny tamin'i Rurh
Bologna, fitsangatsanganana an-tanànan'ny fahalalana
Mahafantatra ny zoron'i Dubrovnik, ny voahangin'ny Adriatika